အချိုမှုန့်၏ ဆိုးကျိုးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Health & Fitness » အချိုမှုန့်၏ ဆိုးကျိုးများ	17
Posted by သျှားသက်မာန် on Jul 29, 2012 in Health & Fitness | 17 comments
အချိုမှုန့်စားသုံးခြင်း၏ ဆိုးကျိုးတွေ ဒီလောက်တောင်များတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ ကျွန်တော်တြို့မန်မာ
နိုင်ငံမှာ အချိုမှုန့်စက်ရုံတောင် လာတည်တော့မယ်ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများ အပေါ်ဘယ်လို
နားလည်ရမှန်းတောင်မသိ့တော့ဘူး။ ၂၀၁၃ အမှီ အချိုမှုန့်စက်ရုံတည်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းသွားမည်တဲ့။
ကဲ… အချိုမှုန့်၏ ဆိုးကျိုးတွေ လေ့လာသွားပါဦး။
Min Aung Naing shared Mg Mandalay‘s photo.
Friday, July 20 at 11:22pm
ko khin kha says: မစားသင့်တဲ့အထဲမှာတစ်အပါအဝင်ဖြစ်နေပါ၏။
Shar Thet Man says: ဟုတ်တယ်…အခုဆိုလူတော်တော်များများမေ့တတ်ကြတယ်ဆိုတာ အချိုမှုန့်ကြောင့်တဲ့
mamanoyar says: အယ်တော့ ဒါဆိုရင်တော့ အချိုမှုန့်လျှော့စားမှဖြစ်တော့မယ်
ma me kyaw says: လျော့စားတော့မယ်။
may flowers says: အင်း…………..နာလည်းအချိုမှုန့်လျှော့မှ။
YUM YUM says: အခုလို ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ လုံးဝကြီးမရှောင်နိုင်ရင်တောင် ခုကစပီး ရှော့စားတော့မယ်။
မမ အညာသူ says: အချိုမှုန့်ကတကယ်ကိုလူကိုဆိုးကြိုးများစွာပေးပါတယ်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အချိုမှုန့်က ဆိုးကျိုးတွေ ရှိတယ်ဆို ..
အဲဒီ အချိုမှုန့် ကုမ္ပဏီကို လက်မခံသင့်ပါဘူး ..
ဒီလို ကျနော် မြင်ပါတယ် ..
Shar Thet Man says: ဟုတ်တယ်…အဲဒါကြောင့်အခု..အချိုမှုန့်အစားအသားမှုန့်တွေပေါ်နေပါပြီ။တန်ဆေးလွန်ဘေးပေါ့နော်…
P chogyi says: ကျွန်တော်သိရတာကတော့
အချို့မှုန့်အစားထိုး ကြက်သားမှုန့်တွေ ခေတ်စားလာပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကြာရင်တော့ ကြက်သားမှုန့်တွေရဲ့ ဆိုးကျိုးကလည်းပေါ်လာဦးမှာပါ။
ပုဇွန်ခြောက်တို့ ငပိတို့စားဖို့ကြံပြန်တော့လည်း ၄၀ ကျော်အသည်းကွဲခြင်းမှာ
ဖော်ပြထားတာဖတ်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။
၁၉၈၃ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက အချိုမှုန့်ကို တစ်စိုက်မတ်မတ်စားလာမိတော့
မတတ်နိုင်တော့ဘူး ကံရှိသလောက်တော့ လူလောကမှာနေရမှာပေါ့။
သန်းထွဋ်ဦး says: မကောင်းသော်ငြား သူမပါလျင်ပေါ့ပေသည်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 103
same kyaw says: မြန်မာတွေ အချိုမှုန့်စားတာ အ၇ိုးစွဲနေဘီ။အ၇င်တုံးက နန်တော်နဲ့ဆွမ်းအုပ်(သိပ်မမှတ်မိ)ဆိုပြီး မြန်မာပြည်မှာ ထုတ်တယ်။နောက်တော့ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီး စက်ရုံပြန်ပိတ်သွားတယ်။စက်ရုံပိတ်တော့ မြန်မာတွေ မစားဘဲနေလို့လား ထိုင်းနဲ့ အရည်အသွေးမမှီတဲ့တရုတ်အချိုမှုန့်တင်သွင်းတယ်။တကယ်ဆို အဲ့ဒီကတည်းကမပိတ်ဘဲ လူထုကို ပညာပေးရမှာ။နည်းနည်းလျှော့စားလာမယ်.ခုပေါ်တဲ့ ခနောကလဲ အချိုမှုန့်ရာနှန်းပြည့်မဟုတ်တောင်နဲနဲတော့ပါတာဘဲ။တရုတ်ပြည်မှာ အချိုမှုန့် ကပြည်ပအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အတွက်ဘဲထုတ်တာ တရုတ်ရဲ့ ၉၀%လောက်ကအချိုမှုန့်မစားဘူး။မြန်မာပြည်ပေါက်တရုတ်ကတော့အချိုမှုန့်စားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေ ကတော့ အချိုမှုန့် အရမ်းသုံးပါတယ်။သိပ်မသုံးတာ ကုလားဆိုင်တွေ သိပ်မသုံးဘူး
mggwa says: အချိုမှုန့်၊ အချိုမှုန့်၊ အချိုမှုန့် . . . . .
လူကို အရသာရှိစေပေမယ့် သေချာတွေးကြည့် ကြောက်စရာ။
အချိုမှုန့်ဆို ဘယ် အချိုမှုန့် မှ မကောင်းဘူး။
အချိုမှုန့်နဲ့ အလားတူတွေလည်း ကောင်းဘူး၊
“အချိုမှုန့်ပမာ ယနေ့ခေတ်ဝိပဿနာ ”
အဲဒီအချိုမှုန့်စက်ရုံတွေလည်း မြန်မာပြည်မှာ ပေါပါ့။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: စားတာကတော့ စားနေကြဦးမှာဘဲ
လိုအပ်နေတဲ့အတွက် သူများဆီက ဝယ်ရဦးမှာဘဲ
မဟုတ်ရင် တရုပ်က အချိုမှုန့်တွေ နှိပ်စက်တာခံနေရဦးမယ်
တစ်ကယ်လို့ အချိုမှုန့်မှာ ဆိုခဲ့သလို ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ထုတ်လုပ်သူတွေကို တိုက်ရိုက်ပြော
ကြည့်ရင် သူတို့ဘာတွေများပြန်ပြောမလည်း သိခြင်သား
Gipsy says: အိမ်မှာတော့ ရှောင်ဖြစ်ပါတယ် .. လိုလိုမယ်မယ်ဆောင်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်ကို
ဖျောက်ပစ်လိုက်တာ ငါးနှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီ ..
ဒါပေမဲ့ အပြင်စာ ဝယ်စားဖြစ်ရင်တော့လဲ ရှောင်လို့ မရပြန်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဗျ ..
အချိုိမှုန့်မပါရင် ခံတွင်းမတွေ့သူများ ကြိုးစားပြီး ရှောင်စေ့ချင်ပါတယ် ..
ရှောင်လေ ဝေးဝေး မူးယစ်ဆေး.. အဲ ဟုတ်ပေါင် အချိုမှုန့်ဘေး … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 10299
မောင်ပေ says: အမရှား ရေးပြမှာဘဲ
စက်ရုံတည်မယ့် ကိတ်စနဲ့ 
အချိုမှုန့် ဆိုးကျိုးတွေ ကို ထပ်သိလာရတယ်ဗျာ
ကျုပ်လဲ ရှောင်နိုင်သလောက် ရှောင်နေတာကြာပါဘီ
အချိုမှုန့် ရှောင်ပါ လို့ ပြောလိုက်ရင်ကို
ဂေါ်ဇီလာကြီး မြို့ ထဲ ဝင်လာသလို ဝိုင်းကြည့်တာကလဲ
ကြောင်ကြီး says: ကြက်သားမှုန့်ဆိုတာနဲ့ အချိုမှုန့် ကုလားဂျီးနဲ့ အရာဂျီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သားမှုန့်အစစ် မဟုတ်ကြောင်း အသိပညာပေးမှု လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါဂျောင်း…..